Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment नयाँ वर्षसँगै पहिलो कारोबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कारोबार कतिमा ? - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, २ बैशाख : नयाँ वर्ष २०७८ को सुरुवातसँगै सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत वर्षको अन्तिम कारोबारका दिन मंगलबार अधिकतम ८९ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य नयाँ वर्षको दोस्रो दिन (आज) बिहीबार तोलामा ३०० रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रतितोला ८९ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला ८९ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य ८९ हजार ३५० रुपैयाँ कायम भएको छ । विवाहको लगन बढेसँगै बजारमा सुनको माग बढ्न थालेको छ ।
सङ्घका अनुसार अहिले दैनिक ४० देखि ४५ किलो सुनको माग आउने गरेको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य भने प्रति तोला एक हजार २९० रुपैयाँ तोकिएको छ । महासंघका अनुसार गत मंगलबारको तुलनामा चाँदी प्रति तोला ३० रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
राजीनामाको कुरा सोध्दा माधव नेपाल बोल्नुभएन : नेम्वाङ
आफ्नै पार्टीलाई पछार्नेहरूलाई इतिहासले माफी गर्ला ?
आज नेप्से साढे १८ अङ्कले घट्यो
नयाँ सरकार गठन गर्न ३ दिनको समय, काम गर्ने वातावरण नै नभएपछि राजीनामा दिएँ : मुख्यमन्त्री गुरुङ
आज चार हजार २२ जना कोरोनामुक्त, ८८८५ जनामा संक्रमण पुष्टि